Igbo Christmas Readings – Catholic Lectionary
Igbo Christmas Readings
EKPERE MMEGHEChineke nna anyį, site na Nwa Gi I meela anyi ndi amughariri ohuru. Nwa Gį ketara oke n’ahu anyi biakwa buru otuonye n’ime anyi. Site n’enyemaka Ya, mee ka anyį na-adiwanye ka Ya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 5:14-21Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Jon nke mbu Nke a bu … Read more
Categories Igbo Mass Readings, Igbo Christmas Readings
EKPERE MMEGHE Nna ji ike niile, I gosiputala omumu nke Onye Nzoputa site n’ihè nke kpakpando. Mee ka o na edu anyį oge niile site n’ihè ya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 5:5-13Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke Jon Onye bu onye na-emeri uwa ma o bughi onye kwere … Read more
EKPERE MMEGHEChineke Nna anyi, site na Kristi Nwa Gi, olileanya nke ndu ebighi abiakwutela uwa. Nye anyi ihè nke okwukwe, ka anyi were na-ekwuputa Ya oge niile dika Onye Nzoputa anyi, were bata n’otito nke alaeze Ya. Site na Dinwenu anyį Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 4:19-21. 5:1-4Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke … Read more
Igbo Mass Readings for Wednesday after Epiphany (Wednezde na-eso Epifani)
EKPERE MMEGHEChineke, Onye bu ihè mba niile, nye anyi anuri nke udo di ebighi ebi, ma tinyekwa n’ime anyi ihè Gi dika I siri tinyekwa n’obi ndi nna-nna anyi ha. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 4:11-18Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke Jon: Ndi m huru n’anya, ebe o bu … Read more
Igbo Mass Readings for Tuesday after Epiphany (Tuezde na-eso Epifani)
EKPERE MMEGHENna, Nwa Gi biara dika dika anyį mgbe O gosiputara onwe Ya n’udi anyį. Nyere anyį aka ka anyį na-adiwanye ka Ya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 4:7-10Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke Jon Ndi m huru n’anya, ka anyi huritanu onwe anyi n’anya, n’ihina ihunaanya si na … Read more
EKPERE MMEGHEDinwenu, mee ka ihè nke otito Gį na-achawaputa n’etiti anyi, duru anyi gafere n’ochichiri uwa nke a, ma dubata anyi n’ihè anuri n’ulo anyi di ebighị ebi. Site na Dinwenu anyį Jesu Kristi … Ihe Ogugu nke mbu: 3:22-24. 4:1-60Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Jon nke mbu Anyi na anata n’aka ya, ihe obula anyi … Read more
Ihe Ogugu nke mbu: 5:14-21Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Jon nke mbu Nke a bu ntukwasiobi anyi nwere na ya, na o buru na anyi ario ihe obula dika uche ya si di, O na ege anyi nti. O buru na anyi ma na O na-ege anyi nti n’ihe obula anyi rioro, anyi amara na anyi … Read more
Ihe Ogugu nke mbu: 5:5-13Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Jon nke mbu Onye bu onye na-emeri uwa ma o bughi onye kwere na Jesu Kristi bu Nwa nke Chukwu? Nke a bu onye sitere na mmiri na obara bia. O bughi naani mmiri ka o ji bia, kama, o ji mmiri na obara. Mmuo ahu bu … Read more
Ihe Ogugu nke mbu: 3:11-21Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo ozi Jon nke mbu: Nke a bu ozi nke unu nuru site na mbido, na anyi ga-ahurita onwe anyi n’anya. Anyi agaghi adi ka Ken, onye buuru onye nke ajo onye ahu, ma gbuo nwanne ya. Gini mere o ji gbuo ya? O bu n’ihina omume ya … Read more
Ihe Ogugu nke mbu: 3:7-10 Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi Jon nke mbuUmuntakiri, unu ekwela ka onye obula duhie unu. Onye obula na-eme ihe ziri ezi bu onye ezi omume dika ya onwe ya si buru onye eziomume. Onye obula na-eme njo bu nwa nke Ekwensu. N’ihina Ekwensu emehiela site na mbido. Ihe mere Nwa nke … Read more
Ihe ogugu nke mbu: 2:29, 3:1-6.Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo ozi mbu Jon: O buru na unu ma na o bu onye eziomume, unu aghaghikwa ima na onye obula na-eme eziomume bu nwa ya. Lee udi ihunaanya Nna gosiri anyi, na a ga-akpo anyi umu nke Chukwu. O bu ihe anyi bu. The mere na uwa … Read more
Ihe Ogugu nke mbu: 2:22-28 Ihe ogugu ewetara n’Akwukwoozi mbu nke JonOnye bu onye ugha? O bu onye na ekwu na Jesu abughi Kristi. Onye di otu a bu onye na – emegide Kristi. O na agonari Nna na Nwa. Onye obula na-agonari Nwa, enweghikwa Nna n’ime ya. Onye ahu nke na-ekwuputa Nwa, na ekwuputakwa … Read more